Hiran State - News: Wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka Hiiraan State oo gaaray Muqdisho.
Wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka Hiiraan State oo gaaray Muqdisho.
Waxaa Magaalada Muqdisho ku soo qulqulaya Wasiirada iyo Mas’uuliyiinta kala duwan ee dowlad goboleedka Hiiraan State ee Soomaaliya ee dalka dibadiisa ku nool , waxaana Mas’uuliyiintan ay ka qeyb yihiin Wasiiro , Mas’uuliyiin iyo Saraakiil Milatari oo ka tirsan dowladda Hiiraan State oo dalka dib ugu soo laabanaya si ay uga qeyb qaataan shirweynaha Wasiirada Hiiraan State , kaasoo ka dhici doona Muqdisho aaqirka bishaan February .
Soo dhoweynta Mas’uuliyiinta maanta timid ayaa waxaa ka qeybqaatay Xubno wasiiro ah oo horey ugu sugnaa Muqdisho iyo Madaxda Xafiiska Madaxweynaha Hiiraan State .
Mas’uuliyiinta maanta Muqdisho soo gaaray ayaa waxaa ka mid ah Wasiirka boostada iyo isgaarsiinta ee dowlad goboleedka Hiiraan State ee Soomaaliya Mudane Aadan Cabdi Wayax iyo Agaasimaha Xafiiska Madaxweyne ku xigeenka Hiiraan State Dr. Maxamed Bukhaari Axmed.
Ilo wareed ayaa waxa ay sheegayaan in cishooyinka inagu soo aadan ay Muqdisho soo gaari doonaan Wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka Hiiraan State ee Soomaaliya , kuwaasoo ka kala imaan doona wadamo ku yaala qaaradaha Afrika, Asia , Yurub iyo America .
Kulanweynaha Wasiirada Hiiraan State ay ku yeelan doonaan Muqdisho ayaa waxa uu noqonayaa kii ugu horeeyay ee loogu dhaariyo xilalka , loogana doodo arrimo xasaasi ah oo gobolada Hiiraan u gaar ah , si loo soo afjaro dhibaatooyinka iyo colaadaha weli ka aloosan gobolka ee ay lugta kula jirto kooxda Alshabaab.
Wasiirka iyo waftiga maanta gaaray Mogdisho ayaa intooda badan u badan aqoonyahano uu ka mid ayahay agaasimaha xafiiska madaxweyne ku xigeenka Hs Dr Buqaari. wasiirka Boostada iyo Isgaarsiinta Mudane Adan Abdi Wayax iyo agaasimaha M/weyne ku xigeenka Dr Buqaari ayaa ka mid ahaa muwaadiniintii reer Hiiraan ee shirkii mudada ka socday ee lagu soo dhisay dowlad goboleedkani ayaa iyagu qeyb weyn ka qaatay iyagoo ka mid ahaa shaqsiyaadkii soo diyaariyey Dastuurka D/goboleedka HS.
Safarkaani ay masuuliyiinta HS ku tageen gudaha wadanka ayaa waxuu qeyb ka yahay dadaalada ay madaxda HS dib ugu laabanayaan gudaha SOmaliya iyaguu Mogdishu ugu siii gudbi doono Hiiraan. waxaa kale oo dhawaantan sidoo kale lagu wadaa iney dhawaantan gaaraan labo wafti oo ay kala hogaaminayaan wasiirka waxbarashada Hidaha tacliinta sare d/goboleedka Hiiraan State oo iyagu ka bixi doona Yurub waftigaan oo iskugu jira wasiiro iyo taliyaasha Militeriga iyo agaasimayaal. halka waftiga kale uu hogaamin doono Wasiirka Garsoorka arimaha Diinta Prof Ibraahim Shiikh Hasan iyadoo ay safarkaani ay ku wehlin doonaan wasiirada ku sugan dalkaasi Kenya. inkasta oo safarka madaxda HS ka hor ay magaalada Mogdisho gaari doonaan tiro wasiiro ah oo horudhac ah oo diyaariya howlaha xukumada horyaalo.
Shir ay dhawaantan dhinaca isgaarsiinta ku yeesheen inta badan golaha wasiirada oo u shir gudoominayey madaxweynaha Hs ayaa leysku raacay in wasiir aan shaqo dibada ka heyn uusan dibada joogi karin loona baahan yahay in dhamaan golaha wasiirada ay gudaha ku soo galaan wasiir kasta waqtiga loogu talo galay maadama halka xilalakooda loo doortay amaba ka shaqeyyaan tahay Hiiraan.
· admin on February 07 2011 13:31:29 · 0 Comments · 2105 Reads ·
14,589,558 unique visits